« ALATSINAINY MAINTY » | NewsMada
« ALATSINAINY MAINTY »
Tsy niseho raha tsy nitsoaka andraikitra Ravalomanana Marc
Nanamarika ny vaninandro omaly ny fisian’ny « Alatsinainy mainty », izay nisian’ny fandrobana tamin’ny 26 janoary 2009. Anisan’ny niteraka fahasimban-javatra maro tamin’iny fotoana iny, ny fitsoahana andraikitry ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc…
« Alatsinainy mainty », na ny 26 janoary 2009, vaninandro manan-tantara teo amin’ny raharaham-pirenena, indrindra teo amin’ny fihetsiketsehana « Revolisiona volomboasary », izay notarihin’ny Filohan’ny tetezamita, Rajoelina Andry. Anisan’ny mbola nanamarika iny « alatsinainy mainty » iny ireo mpomba ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc amin’ny alalan’ny fanarabirabiana ireo mpomba ny « Revolisiona volomboasary ». Maro anefa ireo olona no somary manadino na minia manadino fa nisy ny tsy fandraisana andraikitry ny Filoha teo aloha, Ravalomanana Marc ny amin’ny tsy nanomezana baiko ireo mpitandro filaminana handray andraikitra, tamin’iny fotoan’ny « Alatsinainy mainty iny ». Nanamarika ny tenany, tamin’izany fotoana fa « paikady » tsy hisian’ny fahapotehana sy ra mandriaka no tsy nanomezany baiko.
Paikady tokoa ve ?
Nahatratra 42 no maty nandritra ny fandrobana niseholany tamin’iny vaninandron’ny « Alatsinainy mainty iny » teto an-drenivohitra. Paikady tokoa ve ny fisian’ny ra mandriaka sy fahapotehana fotodrafitrasa maro tamin’iny fotoana iny ? Raha nisy ny fandraisana andraikitra mazava avy amin’ny filoham-pirenena teo aloha, Ravalomanana Marc, tsy niseho ny fahapotehan-javatra marobe tamin’iny 26 janoary 2009 iny. Anisan’izany ny nahamay ny Radiom-pirenena malagasy na ny RNM tetsy Anosy, ny fandrobana teo amin’ireo fivarotana informatika tetsy Behoririka sy ny maro hafa. Raha napetraky filoha teo aloha, ny fanomezana baiko ny mpitandro filaminana hiaro ny vahoaka sy ny fananany, ho tonga ve ny fandrobana sy ny fahafatesana olona marobe mahatratra 42 ?
Niharan’ny fandrobana koa ny MBS sy ny Magro Tanjombato, izay orinasan’ny filoham-pirenena teo aloha, Ravalomanana Marc, saingy navelany fotsiny amin’izao, ankoatra ireo magazay maro. Nihanitombo, araka izany, ireo mpandroba, saingy tokony ho voafehy izany, raha nisy tokoa ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana.
Nisy ny kajikajy politika ?
Raha noheverina, araka izany, fa kajikajy politika ny famelana malalaka ireo mpandroba hanatanteraka iny « Alatsinainy mainty ». Kajikajy sy tetika tokoa hoentina hanasoketana sy hanosoram-potaka ny mpitarika ny hetsika Volomboasary ? Araka ny loharanom-baovao, nisy tamin’ireo magazay voaroba tamin’iny « Alatsinainy mainty » iny no nandraisan’ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc andraikitra, izay tafiditra ao anatin’ilay tondrozotra. Karazany paikady maloto ihany raha ny fijery azy ny fanomezana vahana ireo mpandroba « Alatsinainy mainty » iny. Anisan’ny tafiditra tao anatin’ny kajikajy sy paikady politika ary tsy fanarahan-dalàna ny tsy fanomezana ny fahefana ireo mpitandro filaminana hanao ny andraikiny. Tsy fahamendrehana, araka izany, ny fialana andraikitra sy fialangalanana tamin’ireny fotoana ireny. Mipetraka ho tantara tsy hay kosehina ny tsy fandraisana andraikitra nandritra iny « Alatsinainy mainty » iny, indrindra ho an’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy ny mpomba azy.
N. Randria / Pierre M.
Nalain’ny fanjakana ny fitaovan’ny Radio Viva, ny marain’ny 29 janoary 2009. Ny marainan’io ihany, ny mpomba ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina Andry, nirodorodo teny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey. Nanome toromarika ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Rajoelina Andry, hanatanteraka diabe mihazo eny amin’ny tribonaly eny Anosy, mba hanafaka ireo mpianatra telo izay voatazona, tamin’ny resaka « coktail molotov ». Fanampin’izay, ny fanajanonana ny fanotorana tanimbary teny Andohatapenaka.
Teo Anosy, tsy voafehy ny fihetsiketsehana. Vokany, nisy ny fandrobana ireo fitaovana tao amin’ny RNM sy ny fandorana ny trano. Ny sasany tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana kosa, nihazo an’Andohatapenaka. Ny hafa, nandeha nankany Anosipatrana, izay niafara tamin’ny fandorana ny MBS. Niharan’ny fandrobana sy fandorana koa ny Malagasy Grossiste, Blue Print ary ny Auditorium, ankoatra ny niseho tetsy Behoririka sy ny maro hafa. Nandritra iny fotoan’ny « Alatsinainy mainty » iny, tsy nisy ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana. Nanao randran-tarihiny koa ny fandrobana ireo magazay sy orinasan’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc tany amin’ny faritany. Etsy andaniny izany rehetra izany, ninia nangina sy tsy nihetsika ny mpitandro filaminana.